Nagarik Shukrabar - धरान
वरिपरि रूख, बीचमा दक्षिणबाट उत्तर फर्किएको स्टेज । लाइट पुगेको ठाउँबाहेक अन्यत्र निष्पट अँध्यारो । सम्साँझै बन्द भइसक्ने धरान ८ स्थित यलम्बर सामुदायिक वनको गेट गएको शुक्रबार (पुस ७ गते) भने राति अबेरसम्म खुला थियो जबकि अरू समय भने त्यतिखेर सुनसान हुन्थ्यो ।
श्रमदानमा धराने युवा
मंसिर २१ गते प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन शान्तिपूर्णरूपमा सम्पन्न भएपछि सबैको ध्यान मतगणनामा केन्द्रित थियो । भोलिपल्ट २२ गते बिहानै धरानका झण्डै २ दर्जन युवायुवती धरान १७ स्थित रिसोर्ट लाइनमा भेला भए । चुनावकै भोलिपल्ट युवायुवतीको लस्कर देख्दा स्थानीय सशंकित पनि बने । ती युवाले स्थानीय एक व्यक्तिको घरमा ढुंगा ओसार्न थालेपछि मात्र उनीहरु श्रमदान गर्न आएको कुरा छर्लङ्ग भयो ।
हेयर एन मेकअप कोर्स
हेयर डिजाइन तथा मेकअप(ब्युटी) सम्बन्धी कोर्स गर्न चाहनेहरुलाई खुसीको खबर छ, धरानमा सेवा मात्र होइन, युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले कोर्ससमेत राखेर रेड कार्पेट युनिसेक्स सेलुन एकेडेमी सुरु भएको छ । धरान १०, पुतलीलाइनमा सोमबार एक कार्यक्रमबीचमा धरान उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जु भण्डारी सुुवेदी र नायिका अंशु थापाले संयुक्त रुपमा रिबन काटेर एकेडेमीको उद्घाटन गरेका थिए ।
इटहरीमा फिटनेस सेन्टर खुल्ने क्रम बढ्दो
इटहरी तरहराका विशाल रासयली साथीभाइसँग हिँड्दा मनोरञ्जनका लागि भन्दै लागूऔषधको लतमा फसिसकेका थिए । मौका बेमौकामा उनको ध्यान लागूऔषधबाहेक अन्यत्र जाँदैनथ्यो । लागूऔषध खाने बानी सुध्रिने छनक नदेखेपछि परिवारका सदस्य दिक्क भइसकेका थिए तर चार महिनायता उनको दिनचर्या फेरिएको छ ।
‘नजिकको तीर्थ हेला’ भन्ने नेपालीमा कथन छ । यही कथनसँग मिल्दो गरि हरेक मानिस आफू बसेको स्थानभन्दा टाढा टाढा घुम्न रुचाउँछन् । व्यस्त समयबाट अलिकति फुर्सद निकालेर रमाउन मानिसहरु आफुले मन पराएको ठाउँ घुम्न जाने गर्छन् । ‘सुनेर जानकारी हुन्छ, देखेर विश्वास गरिन्छ र गरेर सिकिन्छ’ भन्ने धारण अनुसार हरेक मानिसले ज्ञान सिक्ने एउटा प्रक्रिया भ्रमण पनि हो ।
धरानमा पनि ‘पर्फमेन्स आर्ट’
धरानको व्यस्त भानुचोक । भानुभक्तको सालिक नजिक ट्राफिक प्रहरी बिटसँगै मान्छेभन्दा अग्लो मोबाइलको सेट छ । कालो पहिरन, कालो मास्कमा युट्युब, फेसबुक, मेसेन्जर, गेमको रुपमा कलाकारहरु आफ्नो अभियोग सहितको प्लेकार्ड बोकेर मोबाइल सेटभित्र पस्छन् ।
गाउँबाट गीत गाउन सहरमा
गायन रियालिटी शो ‘नेपाल आइडल’ले सनसनी मच्चाएको धेरै समय बितेको छैन । पहिलो नेपाल आइडल बनेका पोखराका बुद्ध लामाको गायकीका फ्यानहरु थुप्रै छन् । तिनै अनगिन्ती फ्यानहरुमध्ये एक हुन्, तेह्रथुम जिल्लाको मेन्छ्याम गाउँपालिका २, पौठाकका १० वर्षीय जोसेफ शंकर ।
संस्कृति जोगाउन ‘रुङरीमा’
किरात राई जातिमा कसैको विवाह हुँदा जन्त गएपछि बेहुलातर्फको सायबा(सोल्टी) र बेहुलीतर्फको साइमा(सोल्टिनी)हरुबीच रातभर गीत गाउदै रमाइलो गर्ने चलन छ । घरभित्र विवाहको संस्कार एवं कार्य भइरहँदा बाहिर भने सायबा र साइमाहरु लयात्मक गीत गाइरहेका हुन्छन् ।
आरम्भको रंगमञ्चीय देउसी
भैलेनी आइन, आगन..गुन्यु चोली मागन...! ए है भन भन भाई हो.., देउसी रे...! नेपालीहरुको दोस्रो ठूलो चाड तिहार (यमपञ्चक)को तेस्रो दिन साँझमा लक्ष्मी पूजा सकेपछि घरघरमा गुञ्जिने आवाज हुन् यी । तिहारमा देउसी–भैलो खेल्ने परम्परा उहिल्यैदेखि चलिआएको हो । युवा, बुढापाका, महिला टोलीहरु भट्याउदै देउसी खेल्ने वा गाउदै भैलो खेल्ने तिहारको मौलिक संस्कृति हो ।
ब्याङडाँडामा प्रहरी भवन निर्माणार्थ कन्सर्ट
अस्थायी प्रहरी बिटको भवन निर्माणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले झापाको शिवसताक्षीस्थित ब्याङडाँडामा गत शुक्रबार सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । तिहारको अवसरमा पारेर गाई/गोरु पूजाका दिन आयोजित कार्यक्रममा लोकप्रिय ब्यान्ड अनुप्रस्थसहित कलाकारहरुले दर्शकलाई मनोरञ्जन दिलाए ।
‘हाउस अफ होप’ लेडिज ब्यान्ड
भर्खर १५/१६ वर्षका कलिलो अनुहारहरु । स्कुल र कलेज पढ्ने उमेर । किताब, कलम समाउने तिनका हातहरु जब गिटार, ड्रम, मादल र माइक पक्रन्छ, तब सबैलाई छक्कै पार्ने गरी सांगीतिक प्रस्तुति सुरु हुन्छ । ब्यान्डको नाम हो, ‘हाउस अफ होप’ ।